January 17, 2022 - ApannPyay Media
နာရီပိုင်းအတွင်း အားအင်ကိုပြည့်စေသော အစားအစာ ၁၀ မျိုး
January 17, 2022 by ApannPyay Media
နာရီပိုင်းအတွင်း အားအင်ကိုပြည့်စေသော အစားအစာ (၁၀)မျိုး (၁) ဒိန်ချဉ် ထန်းလျက်နဲ့ တဖန်ခွက် သေးသေး ၊ ရေခဲမပါ (၂) မုန်လာဥနီကို နွားနို့နဲ့ ဖျော် သကြားနဲနဲ ဆားနဲနဲ၊ရေခဲမပါ။ (၃) ကြက်ဥကာကျက်ကို ပျားရည်နဲနဲ သံပုရာတစိတ် နဲ့ရော ၊ ဆားနဲနဲ။ (၄) ငါးရှဥ့်ချဉ်စပ်၊ ငါးရှဥ့်ခြောက်စပ်၊ ငါးရှဥ့်မဆလာ(မိန်းခလေးများငါးရှဥ့်မတည့်သူရှိ) (၅) ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကို ထောပတ်နဲနဲ၊ ပျားရည်နဲနဲ နဲ့ ကြော်စားပါ။ (၆) ကြက်ဥနှင့် ဂတ်စ်ပါသော အချိုရည်တမျိုးကို အမြှုပ်ထအောင် ဇွန်းဖြင့်ခေါက်မွှေပါ။ မွှေပြီးပြီးချင်း အမြှုပ်မငြိမ်ခင် အမြန်သောက်ပါ။ (၇) ကြက်ဥ+သံပုရာသီးတစိတ်+အိုင်ဆိုတောနစ်ပါသောအချိုရည် အနည်းငယ်ရော၍ သောက်ပါ။ (၈) အုန်းစိမ်းရည်၊ ကြံရည်၊ ဓါတ်ဆားရည်၊ ဂလူးကို့စ်ရည်၊ ပဲနို့ ( ကန်စွန်းရိုးနီ … Read more
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၇ မျိုး
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၇ မျိုး ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံး အစားအစာ ဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ အစားအသောက်များဟာ ပြန်နွေးပြီးနောက် စားဖို့ဘေးကင်းသော်လည်း တစ်ခြားအစာများဟာ ဘေးမကင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာသောအစားအစာတချို့ကို ပြန်နွေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါကျန်းမာသောအစားအစာများဟာ နွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့အာဟာရများ ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအစားအစာ ရမျိုးကို နွေးပြီးပြန်မစားသင့်ပါ။ ၁။ ဟင်းနုနွယ် ဟင်းနုနွယ်ကိုပြန်နွေးစားခြင်းဟာ အမှန်တကယ်ဘေးမကင်းပြီး ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်ပါ။ ချက်ပြီးနောက် လတ်ဆတ်တုန်း ချက်ချင်းကုန်အောင်စားပေးပါ။ အကြောင်းမှာ ဟင်းနုနွယ်မှာတွေ့ရတဲ့ နိုက်ထရိတ်(Nitrates)ဓါတ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်နွေးလိုက်တဲ့အခါ နိုက်ထရိတ်က နိုက်ထရိုက်(Nitrites)အသွင်ပြောင်းသွားကာ ဟင်းနုနွယ်က ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ … Read more
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ၊ ငွေဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်များ
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ၊ ငွေဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်များ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ၊ ငွေဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း၊ ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း၊ ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်= ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း၊ ထောင် သုံးလ။ ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း၊ ထောင် တစ်လ။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း၊ ထောင် တစ်လ။ … Read more
သင်္ချိုင်းကိုးခု မှော်ပီယအကြမ်းဆေး စီရင်နည်း (ဆေးကြမ်းဖြစ်တာကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိပါတယ်)
သင်္ချိုင်းကိုးခု မှော်ပီယအကြမ်းဆေး စီရင်နည်း (ဆေးကြမ်းဖြစ်တာကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိပါတယ်) အစွမ်းထက်တဲ့ ပီယဆေးကိုမှ လိုချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် သင်္ချိုင်းကိုးခု မှော်ပီယ အကြမ်းဆေး စီရင်နည်းကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဆေး ဖြစ်တာကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆေးကို စီရင်ခြင်း မပြုမီ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ သင်္ချိုင်းကိုးခု မှော်ပီယ အကြမ်းဆေးဟာ သောက်ဆေး မဟုတ်ပါ ဆောင်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်ဆေး ၊ ဆေးကြမ်းဖြစ်တာကြောင့်မို့ လာဘ်ပိတ်တတ်ပါတယ်။ ပီယကိစ္စများအတွက် အကြမ်းသုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ချည်းသက်သက်ထက် ပီယအင်း ၊ ပီယဖယောင်းတိုင်များဖြင့် တွဲဖက် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင်တော့ သွေးရောစပ်ပြီး ပီယအတိုက် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ချိုင်းကိုးခု မှော်ပီယ အကြမ်းဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတချို့ကတော့ … Read more
ရေသန့်ဗူးထဲကရေသန့်ကို ကြိုချက်ပြီးသောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းအယူအဆ
ရေသန့်ဗူးထဲကရေသန့်ကို ကြိုချက်ပြီးသောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းအယူအဆ ရေသန့်ဗူးထဲက ရေသန့်ကို ကြိုချက်ပြီး ‌‌သောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဂျင်း အယူအဆ.. ရေသန့်ဗူးထဲက ရေသန့်ကို ကြိုချက်ပြီး မသောက်ရဘူးလို့ပြောကြတယ်.. ဆရာ.. အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့.. ဘာအန္တရာယ်ရှိတာလဲ?.. မသိဘူးတဲ့ သူများပြောတာကိုပြောပြတာ ဆိုပဲ.. ရေသန့် ဆိုပြီး ပုလင်းထဲထည့်ထားတဲ့ ရေ တွေကို ကျွန်တော်တို့ သောက်လာခဲ့ကြတာ ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုစာ နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ.. အဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ ဘုံဘိုင်ကရေကို ရေစစ်နဲ့ခံပြီး ရေအိုးထဲထည့် သောက်ခဲ့ကြတာ.. တချို့ကတော့ ကျိုချက်ပြီး သောက်ကြတာပေါ့.. ကျိုချက်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပိုးမွှားတွေ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ရန်က ကင်းဝေးချင်တာပါ။ အခု ရေသန့်ဆိုတဲ့ ဗူးထဲက ရေ ကရော ဘာလို့ ကျိုချက်ပြီး … Read more
အညာအစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “နွားနို့ခဲ” ပြုပ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
အညာအစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “နွားနို့ခဲ” ပြုပ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် အညာအစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သဘွတ်ခွဲကျေးရွာမှ “နွားနို့ခဲ” ပြုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပါ.. အဆင့် (၁) အဆင့် (၂) အဆင့် (၃) အဆင့် (၄) အဆင့် (၅) အဆင့် (၆) အဆင့် (၇) အဆင့် (၈) မူရင်း ပုံပိုင်ရှင်ကို လေးစားစွာဖြင့်. အညာအစားအစာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ “ႏြားနို႔ခဲ” ျပဳပ္လုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ အညာအစားအစာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ သဘြတ္ခြဲေက်းရြာမွ “ႏြားနို႔ခဲ” ျပဳပ္လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ပါ.. အဆင့္ (၁) အဆင့္ (၂) အဆင့္ (၃) အဆင့္ (၄) အဆင့္ (၅) အဆင့္ (၆) အဆင့္ (၇) အဆင့္ (၈) … Read more
လွယ်လွယ်ကူကူ စမိုင် လုပ်နည်း
လွယ်လွယ်ကူကူ စမိုင် လုပ်နည်း “လွယ်လွယ်ကူကူ စမိုင် လုပ်နည်း” စမိုင်ခြောက် (ကြာဇံခြောက်) ၁၀ ကျပ်သားကို အရင်ဆုံး လှော်ပြီးနောက် သီးသန့် ဖယ်ထားရမည်။ အိုးတလုံးမှာရေ ၂ လီတာ လောက်ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ.. စပျစ်သီးခြောက် ၃ ကျပ်သား.. သီဟိုဠ်ဆံ ၂ ကျပ်သားကို ရေဆေးပြီးထည့်ပါ.. (မှတ်ချက်။ ။ စပျစ်ခြောက် အမဲရောင် မသုံးရပါ။ အမဲရောင်သုံးပါက စမိုင်တအိုးလုံး မဲသွားနိုင်သည်) ပြီးရင် လှော်ထားတဲ့ စမိုင် ၁၀ ကျပ်သားကို ထည့်ပါ.. သကြား ၇ ကျပ် သားထည့်ပါ.. ဖါလာစေ့ ၄ စေ့ လှော်ပြီးထုထည့်ပါ.. သစ်ဂျပိုးခေါက် ၂ ခုထည့်ပါ.. နို့စိမ်းတဘူးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံ ထည့်ပါ.. နို့ဆီကိုတဘူးရဲ့ … Read more
တောထဲ တောင်ထဲမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးမရှိဘူးဆိုရင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရပါ
တောထဲ တောင်ထဲမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးမရှိဘူးဆိုရင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရပါ ထိခိုက် ဒဏ်ရာများအတွက် အနာကျက်တဲ့ ငှက်ပျောစေး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငုတ်ထိုး ခြေချော် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရကာ သွေးထွက်သံယို အနာတရ ဖြစ်တတ်ကြသည်က လူတိုင်းသဘာဝပင် ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ပါလျှင် ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမည်မသိ အခက်တွေ့တတ်ကြပါ၏။ ဆေးလည်းမသိ ဆေးလည်းမရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဖြင့် ဝေးကွာပါလျှင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါ။ ငှက်ပျောပင်ကို ခုတ်လိုက်ပါ အစေးများ ထွက်လာပါမည်။ ထိုအစေးဖြင့် ဒဏ်ရာကို သုတ်လိမ်းပြီး အဝတ်စည်း ထားလိုက်ပါ။ သွေးတိတ်သွားပါမည်။ ၂ ရက် ၃ ရက်ကြာလျင် အနာကို ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ အံ့ဖွယ် အနာကျက်ပြီး ဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းနေမည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အမှတ်မထင် ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါမူ … Read more
ဆန်အတိုင်းနဲ့ရွှေအတိုင်းဟာ အတူတူဘဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ လွယ်ပါတယ်
ဆန်အတိုင်းနဲ့ ရွှေအတိုင်းဟာ အတူတူဘဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ လွယ်ပါတယ် ဆန်အတိုင်းအတာ ပြည်ကို တွက်တတ်ရင် ရှေှအတိုင်းအတာ ပဲ၊ရွေး ကိုလဲ သင် တွက်တတ်မှာပါ ဆန် ၁ တင်း မှာ ၁၆ ပြည် ရှိသလို ရွှေ ၁ ကျပ်သားမှာ ၁၆ ပဲ ရှိတယ်။ ဆန် ၈ ပြည် ကို တခွဲ လို့ ခေါ်သလို ရွှေ ၈ ပဲ ကို ငါးမူး လို့ ခေါ်တယ် ။ ဆန် ၄ ပြည် ကို တစိပ် လို့ ခေါ်ကြသလို ရွှေ ၄ ပဲ ကို တမတ်သား လို့ … Read more
ခရမ်းပင် အသီးကောင်းအောင် ပြုစုစိုက်ပျိုးနည်း မြေဩဇာကောင်းရမည်။ သဲနှုန်းမြေဖြစ်လျှင် ကောင်းသည်။ ခရမ်းပင်ဟာ အဟာရဓာတ်များများစားတဲ့ သီးနှံဖြစ်ပါတယ်။ မြေဩဇာတွေမှာ အထူးသဖြင့် အပင်ကြီးထွားသန်တဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်မျာများပါတဲ့ ဓာတ်မြေဩဇာတွေကျွေးပြီး ပွင့်သီးတဲ့ ဖော့စဖိတ်နဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ ပိုတက်စီယမ်တွေမကျွေးရင် အပင်ကဟုန်ပြီးကြီးမယ်။ အပွင့်အသီးနည်းမယ်။ ယူရီးယားက စိုက်ချိန်မှာ ၅၀ ကီလို တစ်အိပ်ထည့်သလို စိုက်ပြီး တစ်လ နှစ်လ ကြာရင် တစ်အိပ်ထပ်ထည့်ရမယ်။ တီစူပါနဲ့ ပိုတက်စီယမ်က မြေပြင်တုန်း နှစ်အိပ်ထည့်ရမယ်။ စိုက်ရာမှာ စိုက်ဘောင်နဲ့ (တန်းကြား ၃ ပေ ပင်ကြား ၂ ပေ )ကိုယ်စိုက်မယ့် ခရမ်းမျိုးလိုက်ပြီးစိုက်ပါ။ သိသိသာသာအေးတဲ့ရာသီ ၁၃° C ထက် နည်းရင်ဖြစ်စေ၊ ညအပူချိန် ၂၁°C အောက်ရောက်ရင်ဖြစ်စေ၊ အသီးမတင်နိုင်ပါ။ အသင့်တော်ဆုံးက ၂၁ … Read more